Ny Merina, izay antsoina hoe koa Antimerina na Hova, dia vondrom-poko monina ao amin' ny faritra afovoany amin' i Madagasikara. Izy ireo no foko lehibe indrindra eto Madagasikara. Mifangaro ny niandohan' izy ireo, ka ny Aostrôneziana tonga talohan' ny taonjato faha-5 no maro an' isa, ary taonjato maro taty aoriana niaraka tamin' ny Arabo, ny Afrikana ary vahoaka hafa. Miteny ny fitenim-paritra merina, izay fototry ny teny malagasy ôfisialin' i Madagasikara, izy ireo.
Raha faritana ara-jeôgrafia ny misy azy ireo dia hita ao afovoan' ny Nosy (Faritanin' Antananarivo teo aloha), ao amin' ny Faritra Analamanga sy ny manodidina izy ireo. Izany hoe eo ampovoan-tany sy eny amin' ny vohitra avo eto Madagasikara, eo amin' ny tampon-kavoana voafaritry ny tanin' i Vonizongo ao avaratra, ny tendrombohitr' Ankaratra ao atsimo, ny reniranon' i Sakay ao andrefana, ary ny tandavan-tendrombohitr' Angavo ao atsinanana.
Nanomboka tamin' ny faramparan' ny taonjato faha-18 dia nanitatra ny faritra ara-pôlitika teo ambany fahefany niainga amin' ny renivohiny anatiny, mivoaka mankany amin' ny faritra hafa amin' ny Nosy ny mpanjaka merina Radama I, ary nanampy tamin' ny fampiraisana ny Nosy teo ambany fitondrany ny mpanjakany. Niady indroa tamin' ny Merina ny Frantsay tamin' ny taona 1883-1885 sy tamin' ny taona 1895 ka nanjanaka an' i Madagasikara tamin' ny taona 1895–1896 ary nanafoana ny Fanjakan' Imerina tamin' ny taona 1897.
Nanangana fotodrafitrasa fitarihan-drano vaovao sy be pitsiny ary toeram-pambolena varimbazaha tena mamokatra tany amin' ny lembalemba afovoany eto Madagasikara izy ireo tamin' ny taonjato faha-18. Ny vahoaka merina dia nizarazara ara-tsôsialy nahitana sarangam-poko, sy asa ifandovana ary fifanambadian' ny sampy mpihavana, ary ny iray na roa tamin' ireo mpanjaka lehibe sy ela fanapahana tamin' ny vahoaka merina dia mpanjakavavy.
4.1 Saranga teo amin' ny fiarahamonina
4.2 Fombafomba sy vakoka
4.4 Asa fivelomana
Mbola resabe hatrany ny momba ny fiavian' ny Merina. Ny Merina dia manana toetra ara-batana sy kolontsaina izay mampiray azy ireo mazava tsara amin' ny Maleziana-Indôneziana ary amin' ny Melanezina. Araka ny tsangan-kevitra nahazo mpankasitraka indrindra, ny Merina dia avy amin' ny Maleziana tonga teto Madagasikara tokony ho 2 000 taona lasa izay, izay nijanona teo amin' ny morontsiraka nandritra ny arivo taona teo ho eo vao nanomboka nifindra tany amin' ny faritra avo. Very ny fahatsiarovana ireo fiaviana ireo teo anivon' ny Merina. Nanomboka nanorim-ponenana teto Madagasikara teo anelanelan'ny taona 200 sy 500 ny Aostrôneziana. Tonga tamin' ny sambo izy ireo ary avy amin' ny vahoaka avy any Azia Atsimo-Atsinanana. Io firohotan' ny olona isan-karazany io no niavian' ny foko malagasy isan-karazany tamin' ny tapaky ny taonjato faha-2. Ny Merina angamba no tonga voalohany, na dia tsy azo antoka aza izany, ary ny foko hafa eto Madagasikara dia mihevitra azy ireo ho olona tonga taty aoriana teto amin' ny Nosy. Azo inoana fa nifangaro sy nitambatra tamin' ireo teratany eto Madagasikara antsoina hoe Vazimba, izay tsy dia fantatra loatra ny kolontsainy, ny Merina.
Tonga tany amin' ny faritra avaratry ny Nosy ny mpivarotra soahily-arabo sy indiana. Nentina tany amin’ny morontsiraky ny Nosy ny andevo afrikanina teo anelanelan’ny taonjato faha-13 sy faha-18. Ny mpivarotra pôrtogey no Eorôpeana voalohany tonga tamin’ny taonjato faha-15, narahin’ny fanjakana eorôpeanina hafa.
Araka ny lovantsofina am-bava eto amin' ny Nosy, dia tonga tao afovoan' ny Nosy ny Merina "tena Aostrôneziana" tamin' ny taonjato faha-15 ary nanorina ny fiarahamoniny tao noho ny ady sy ny fanerena mpifindra monina teny amoron-tsiraka. Tao afovoan' i Madagasikara no nanorim-ponenana ny Merina, ka lasa iray amin' ireo fanjakana telo lehibe teto amin' ny Nosy tamin' ny taonjato faha-18 – ny roa hafa dia ny Fanjakana Sakalava any avaratra-andrefana sy ny Fanjakana Betsimisaraka any avaratra-atsinanana.
Ireo merina tonga voalohany, noho ny fahazotoana sy ny fahaizany manavao dia nanangana tetikasa fitarihan-drano midadasika izay nanampy tamin'ny fampihenana ny rano tao amin' ny heniheny, nanondraka ny tany azo volena, ary namboly vary indroa isan-taona. Nipoitra ho vondrona matanjaka ara-pôlitika sy fanjakana manankarena izy ireo tamin'ny faran'ny taonjato faha-18. Ny renivohitry ny fanjakany dia nijanona ho renivohitr' i Madagasikara ankehitriny.
Tamin' ny taonjato faha-12 sy faha-13 no nisy an' ireo mpanjaka merina voalohany ananana fanazavana momba izany. Nanomboka tamin' ny mpanjaka Andriamanelo (taonjato faha-16) sy Ralambo ary Andrianjaka nandimby azy no naha fampiraisana ny Merina, saingy tamin' ny taonjato faha-19 vao vitan' Andrianampoinimerina ny famoriana izay. Radama I zanany no nandimby azy, izay nanomboka nandrafitra ny fiaraha-miasa tamin' ny Eorôpeanina ary noho io fisokafana io ihany koa dia afaka nametraka ny fahefany tamin’ny saika manerana ny tany manontolo, ka naharesy fanjakana hafa teo an-toerana (ohatra ny Fanjakana Sakalava).
Io Fanjakana Merina tamin' ny andron-dRadama I io indrindra no neken' ny fahefana eoropeanina ho "Fanjakan' i Madagasikara".
Ny lovantsofina am-bava dia mitantara ny nipoiran' ny fanjakana iray tany amin' ny faritra afovoan' i Madagasikara - faritra antsoina hoe Imerina - niverina tany amin' ny mpanjaka Andriamanelo tamin' ny taonjato faha-16. Tamin' ny taona 1824 dia saika naharesy ny faritra rehetra eto Madagasikara avokoa ireo mpanjaka merina, indrindra tamin' ny alalan' ny tetika ara-tafika, ny fifanekena ary ny pôlitika nataon' Andrianampoinimerina (manodidina ny taona 1785–1810) sy ny zanany Radama I (1792–1828). Ny Fanjakana Britanika mpanjanaka dia nanaiky ny fiandrianam-pirenen' ny Fanjakana Merina sy ny fifehezany ny nosy Madagasikara tamin' ny taona 1817. Nandray tsara an’ ireo mpivarotra eorôpeanina i Radama I ary namela ny misiônera kristiana hanorina misiôna eto Madagasikara. Taoriany, ny vahoaka merina dia nofehezin' ny mpanjakavavy Ranavalona I nanomboka tamin' ny taona 1828 ka hatramin’ny 1861, ny mpanjakavavy Rasoherina tamin' ny taona 1863 ka hatramin' ny 1868, ary ny mpanjakavavy Ranavalona II no nanjaka tamin' ny taona 1868 ka hatramin' ny 1885.
Ny fidiran' ny kolontsaina eorôpeanina dia niaraka tamin' ny fanavaozana haingana ny firenena sy ny fielezan' ny fampianarana, indrindra fa ny fidiran' ireo misiônera prôtestanta britanika. Teo anelanelan' ny taona 1868 sy 1869 dia samy niova fo ho Kristiana tamin' ny fomba ôfisialy ny mpanjakavavy Ranavalona II sy ny praiminisitra Rainilaiarivony, ka lasa fivavahana ôfisialin' ny fanjakana ny prôtestantisma.
Nanitatra ny fahafahany tamin' ny varotra ireo mpivarotra arabo soahily ary ny firenena eorôpeana mpanjanaka toa an' i Joseph-François Lambert, mpivarotra frantsay, dia nanao sonia fifanekena niadian-kevitra tamin'ny mpanjaka Radama II momba ny tany fambolena fary sy indostria manamorona ny lemaka amorontsirak' i Madagasikara. Nantsoin’ ny vahoaka Merina hoe Tanindrana ny Malagasy monina eny amoron-tsiraka. Ireo asa sy toeram-pambolena ireo dia nampanaovina an'ireo andevo nohafarana avy any ivelany tamin' ny asa an-terivozona . Ny fidiran' ny andevo be indrindra dia nentin' ny Arabo omany sy ny Frantsay. Iray amin' ireo niharan' izany ny vahoaka makoa avy any Môzambika, fisamborana andevo ary fanondranana izay nanandrana nanome fahafaham-po izany filana izany. Nofoanan' ny fitondrana frantsay ny fanandevozana tamin' ny taona 1896, izay nisy fiantraikany ratsy tamin' ny harenan' ny Merina sy tsy Merina izay niankina tamin' ny toeram-pambolena nasain' ny andevo.
Nifarana ny fanjakazakan' ny Fanjakan' Imerina manerana an' i Madagasikara tamin' ny Ady Frantsay-Hova voalohany tamin’ ny taona 1883 ka hatramin’ ny 1885, nateraky ny fampanofana iadiana nosoniavin-d Radama II. Tamin’ ny fiafaran’ ny ady dia natolotr’ i Madagasikara an’ Antsiranana (Diégo Suarez) any amin’ ny morontsiraka avaratra ho an’i Frantsa i Madagasikara ary nandoa vola 560 000 farantsa volamena ho an’ny mpandova an’i Joseph-François Lambert, Frantsay izay nampanantenain' ny mpanjaka Radama II tombontsoa ara-barotra be dia be, izay nofoanana tatỳ aoriana. Nambaran’ny Frantsay ho prôtektôrata i Madagasikara tamin’ny taona 1894, izay nolavin’ny mpanjakavavin’ Imerina tamin’izany fotoana izany. Ny Ady Frantsay-Hova faharoa no nanaraka ny taona 1895, rehefa tonga tany Mahajanga (Majunga) ny miaramila frantsay ary nandeha tamin’ny lalan’ny reniranon' i Betsiboka ho any Antananarivo renivohitra, ka tsy nampoizina ny mpiaro ny tanàna. Tamin'ny taona 1896 no nampiankinan'ny Frantsay an'i Madagasikara, ary tamin'ny 1897 dia lasa mponina tao amin' i Madagasikara zanatany frantsay (frantsay: Colonie de Madagascar et dépendances) ny vahoaka Merina.
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20 dia nitarika hetsika nasionalista manohitra ny Frantsay ny Merina. Mpitondra fivavahana prôtestanta malagasy, dia ny mpitandrina Ravelojaona, no nitarika ity hetsika ity, izay monina tao Antananarivo. Fikambanana miafina natokana hanamafisana ny maha malagasy no niforona tamin'ny taona 1913, antsoina hoe Vy Vato Sakelika (VVS). Nofaizina tamin'ny voalohany tamin'ny alalan' ny fisamborana maro tamin'ny taona 1915 sy 1916, nipoitra indray ilay hetsika tamin'ny taona 1920 tamin'ny alalan'ireo Kômonista nahazo alalana tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny Antoko Ankavia Frantsay tany Frantsa.
Niteraka fikomiana an-karihary teto Madagasikara ny mosary tamin’ny taona 1943 sy 1944. Ny lalàmpanorenan'ny Repoblika fahefatra Frantsay tamin'ny 1946 dia nahatonga an' i Madagasikara ho Territoire d'Outre-Mer ("faritany ampitan-dranomasina") ao anatin'ny Union Française ("Vondrona Frantsay").
Tamin' ny taona 1947 dia niharan' ny famoretana mafy ny Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache (MDRM), ary ny vahoaka merina dia hita fa voahilikilika nandritra ny fotoana elaela teo amin' ny fiainana ara-tsôsialy sy ara-pôlitikan' i Madagasikara, indrindra fa tsy nanana anjara toerana manokana tamin' ny fanatanterahana ny fahaleovantena izy ireo.
Nahazo fahaleovantena feno i Madagasikara tamin' ny taona 1958 amin' ny naha Repoblika Malagasy azy. Niatrika fifaninanana tamin’ny foko hafa ny Merina. Ny filohan’ny Repoblika voalohany Philibert Tsiranana dia Malagasy tantsiraka avy amin’ny foko tsimihety, ary afaka nanamafy ny fahefany tamin’ny alalan’ny rafitra mpandresy, raha toa ka nihamalemy ireo nasiônalista merina ao amin’ny Antokon' ny Kongresin' ny Fahaleovantenan' i Madagasikara (AKFM) noho ny fisarahana teo amin'ny ankolafy havia sy ankolafy mpanindrahindra tanindrazana. Ny Merina no mandrafitra ny maro an' isa amin' ny avara-pianarana sangany sy ny sarangan' ny nahita fianarana eto Madagasikara. Matanjaka izy ireo amin' ny lafiny ara-toe-karena sy eny amin' ny oniversite ary ao amin' ny governemantan' i Madagasikara.
Merina ny filohan' i Madagasikara voafidy tamin' ny taona 2002, nandimby an-dRatsiraka Didier, i Ravalomanana Marc, izay niharan' ny fanonganam-panjakana notarihin' i Andry Rajoelina, izay Merina tahaka azy ihany, tamin' ny taona 2009. Nitondra ny tetezamita tamin' ny taona 2009 hatramin' ny 2014 i Andry Rajoelina. Nandimby azy tamin' ny alalan' ny fifidianana i Hery Rajaonariampianina tamin' ny taona 2014, ary i Andry Rajoelina indray no lany nandimby an' io tamin' ny taona 2019.
Ny fiteny merina, izay fitenim-paritra amin' ny teny malagasy, dia tenenin' ny ampahefatry ny mponina eto Madagasikara; izy io dia sokajiana ho fiteny malagasin' ny afovoan-tany, miaraka amin'ny fitenim-paritra betsileo, bezanozano, sihanaka, tanala, ary vakinankaritra. Ny fiteny merina no ifotoran' ny fiteny malagasy ôfisialy, ampian' ny fiteny frantsay araka ny lalàm-panorenan' ny taona 2010 izay nametraka ny Repoblika fahefatra. Teo aloha, araka ny lalàm-panorenan'ny taona 2007, ny fiteny malagasy dia iray amin' ireo fiteny ôfisialy telo miaraka amin'ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy. Ny fiteny merina ao anatin'ny vondrom-piteny malaiô-pôlineziana, izany hoe manana fototra ao amin' ny vondrom-piteny aostrôneziana.
Izany ary dia voaporofo tokoa satria misy teny mitovy amin' ny teny malagasy sy teny indôneziana, filipina, ary maleziana. Ohatra amin' izany ny teny malagasy hoe mora izay hita koa ao amin' ny teny indôneziana hoe murah izay mitovy dika hoe "tsy lafo". Ohatra azo raisina koa ny teny hoe laoka amin'ny teny malagasy ary lauk amin'ny teny malaiziana. Izany fotovian'ny teny izany dia tena tsapa na eo amin'ny feo na eo amin' ny fomba fanoratana.
Ny fivavahan-drazana merina (toy ny an' ny ankamaroan' ny Malagasy) dia mino ny fisian' ny andriamanitra mpamorona atao hoe Zanahary na Andriananahary na Andriamanitra.
Ny masina dia nitana toerana lehibe teo amin' ny lafim-piainana rehetra. Fanomezam-boninahitra ny mpanjaka, nampiraisina tamin' ny maha-andriamanitra azy, dia nofaritana ho fanasinana fa tsy fanamasinana.
Ny Merina taloha dia nino fa, aorian' ny fahafatesany, dia nanatevin-daharana ny tontolon' ny razana ny fanahin' ny maty (atao hoe avelo), izay tontolo eo amin' ny tendrombohitra avo iray. Ireo fanahy mifandray amin' ny zavamananaina (indraindray mety ho biby) dia misy karazany maro, anisan' izany ny ambiroa, ny avelo, ny tandindona na ny matoatoa.
Nisy ny mpisorona manokana amin' ny lanonana, fa nisy koa ny ombiasy na mpanandro izay manam-pahaizana manokana momba ny masina sy mifandray amin' ireo hery tsy hita maso. Niady tamin' ny mpamosavy ihany koa ireto farany. Nifandray amin' ny fanompoana ny mpanjaka ny nivoaran' ny fivavahana amin' ny sampy.
Anisan' ny fomba amam-panao ny famorana ankizilahy (5 ka hatramin' ny 12 taona) sy ny famadihana (fomba fanao iraisan' ny Merina amin' ny Betsileo). Ny hetsika ara-tsôsialy merina dia nofaranana tamin' ny fankalazana isan-taona ny Fandroana, izay fanamasinana ny mpanjaka sy ny fianakaviana ary ny taom-baovao, nahitana koa ny lapabe sy fahalalanan' ny firaisana ara-nofo atao valabe.
Hatramin' ny niovan' ny mpanjakavavy Ranavalona II ho Kristiana tamin' ny taona 1868, dia ampahany betsaka amin' ny vahoaka merina no lasa Kristianina, izay matetika mitady tombontsoa manokana amin' ny voalohany (nanao "rebik' omby" na "rebik' ondry"). Maro amin' ireo finoana sy fanao nentim-paharazana taloha no mbola velona.
Ny mpanjaka Radama I dia nandray tsara ireo misiônera kristiana nanangana misiôna teto Madagasikara tamin’ny taona 1810. Ny andriana merina no nivadika ho Kristianina voalohany. Ny London Missionary Society dia nanangana misiôna maro manerana ny morontsirak' i Madagasikara tamin'ny taona 1820. Ireo izay niova fo dia nomena vatsim-pianarana tany Lôndra ary fianarana tany Manchester.
Noho ny fitaoman’ny misiônera britanika, dia niova tanteraka ho Prôtestanta ny saranga ambony merina tamin’ny tapaky ny taonjato faha-19, nanaraka ny ohatry ny mpanjakavavin’izy ireo, Ranavalona II. Ny fielezan'ny prôtestantisma tany am-boalohany teo amin'ireo sangany amin' ny Merina dia niteraka fanavakavahana ata-tsaranga sy ara-poko teo amin' ny mpanaraka ny kristianisma. Ny mpandika teny katôlika no tian'ny Frantsay ary nivadika ho Katôlika ireo andevon' ny Merina taloha. Prôtestanta anefa ny saranga mpitondra sy ambony. Nanandrana niditra an-tsehatra ny andriana, tamin’ny fandroahana ireo misiôna kristiana sasany. Izany fihetsehana izany no nahatonga ny fisaratsarahan-tsekta ara-pivavahana tamin'ny firafitry ny mponina ankehitriny.
Fiarahamonina sy kolontsainaHanova
Saranga teo amin' ny fiarahamoninaHanova
Amin' ireo foko malagasy rehetra, ny Merina dia nanana rafitra matankaka nahitana sarangam-poko. Ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, toy ny vondrom-poko maro aty Afrika, dia nisy sokajin' olona roa, dia ny olona afaka antsoina hoe Fotsy, izay nanana razambe manana endrika sy toe-batana malagasy aziatika, ary ireo mpanompo na Mainty, izay nanana razambe afrikana, nosamborina avy tany amin' ny faritra hafa eto Madagasikara. Tsy mifototra amin’ ny endrika sy toe-batana anefa ny fanavahana ny Fotsy sy ny Mainty eo amin’ny Merina, hoy i Karen Middleton, fa raha amin'ny fananana fasam-pianakaviana: ny Fotsy nanana fasam-pianakaviana, fa ny Mainty dia ireo tsy nanana fasam-pianakaviana na efa nanangana fasana vao haingana. Nizara telo ny vahoaka merina, dia ny Andriana, ny Hova (olona afaka), ary ny satanga ambany indrindra atao hoe Andevo.
Ny saranga tsirairay dia nisy fizaràna koa avy eo. Mizara enina ny Andriana, izay samy nanana asa nolovaina, ary manao fifanambadian' ny mpihavana.
Ny fototry ny fomban-drazana ny Merina momba ny sarangam-poko Andriana sy Hova dia natsangan' ny mpanjaka Ralambo tamin' ny taonjato faha-16. Mpamory sy mpanorina fanjakana ny Andriana, tahaka ny mpanjaka Ralambo (1757-1600 tany ho any) namorona ny fanjakan' Imerina Roa Toko, ka nampitambatra ny faritra roa: Avaradrano sy Vakinisisaony. Avy eo, ny mpanjaka Andriamasinavalona (1675-170) dia namorona ny fanjakan' Imerina Efa-Toko tamin' ny fampivondronana ny faritra efatra: Avaradrano, Vakinisisaony, Marovatana ary Vonizongo. Avy eo, ny mpanjaka Andrianampoinimerina (1778-1810) dia namorona ny fanjakana Imerina Enin-Toko ka nampitambatra ny faritra enina: Avaradrano, Vakinisisaony, Marovatana, Vonizongo, Imamo ary Imerinatsimo na Vakinankaratra. Avy eo, ny mpanjaka Radama I dia nampivondrona fanjakana maro tao amin' ny Nosy ary namorona ny Fanjakan' i Madagasikara.
Ny firaketana an-tsoratra tamin'ny taonjato faha-19 dia mampiseho fa ny Andevo dia mainty hoditra nohafarana, ary izy ireo no ampahatelon'ny fiarahamonina merina. Ny fiarahamonina merina dia nivarotra andevo tany amin' ny faritra avo ho an' ny Miozolmana sy Eorôpeana mpivarotra andevo any amin'ny morontsirak' i Madagasikara, ary nividy andevo afrikana tatsinanana sy atsimo-atsinanan' i Afrika tamin'izy ireo ho an'ny tanimboliny manokana teo anelanelan'ny 1795 sy 1895.
Ny fanambadiana sy ny firaisana ara-nofo teo amin'ny fotsy sy mainty dia fady. Ny Andriana miaraka amin' ny Andriana, manaraka fitsipika voafaritra mazava, ny Hova amin' ny Hova ary ny Mainty amin' ny Mainty. Ny Andevo, izay sata nihatra amin' ny olona aorian' ny fandikan-dalàna nataony na trosa tsy voaloany - ary izany na inona na inona fiaviany - dia samy nifanambady izy samy izy ihany koa.
Araka ny tatitra tamin' ny taona 2012 nataon'i Gulnara Shahinian – mpitarika manokana ny Firenena Mikambana momba ny endrika fanandevozana amin'izao fotoana izao, ny taranaky ny andevo taloha dia mbola mijaly ao anatin'ny fiarahamonina merina amin'izao fotoana izao, ary voailikilika ara-tsôsialy ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy.
Fombafomba sy vakokaHanova
Ny Vazimba dia misongadina amin' ny tantara am-bava merina sy teo amin' ny fihevera' ny vahoaka. Voalaza fa ny Vazimba no mponina voalohany teto Madagasikara, taranaky ny tantsambo avy any Azia Atsimo-Atsinanana izay mety nanana toe-batana pigmea. Amin'ny Malagasy sasany, ny Vazimba dia tsy heverina ho olombelona mihitsy, fa endrika zavaboary manana hery mahagaga.
Ao anatin' ny fito taona voalohany amin' ny fiainan' izy ireo, ny ankizilahy dia matetika forana amin' ny fombafomba iray izay angatahan' ny havany ny tsodrano sy ny fiarovan' ny razana. Ny Merina koa dia mamono ny ombiny amin' ny fomba feno herisetra tsy mahazatra, avy eo mahandro sy mihinana ny henan' ilay omby aorian' izany.
Ny Merina dia mino fa tanin-drazany ny taniny ary maneho fanajana ny razambeny amin' ny fandevenana azy ireo any amin' ny fasam-pianakaviana izay matetika ao amin' ny tanàna niaviany. Maro no mino fa afaka miditra an-tsehatra amin' ny zava-mitranga eto ambonin' ny tany ny razana, na soa na ratsy, ary io finoana io no mamolavola ny fihetsika sy ny fisainan' ny Malagasy maro.
Ny sakafon' ny Merina dia tena anjakan' ny vary ka ny hoe "mihinam-bary" fotsiny no ilazana ny hoe "misakafo". Io foto-tsakafon' ny Merina io no tena zava-dehibe ka heverina ho masina, ary ny finoana iombonan' ny Merina dia milaza fa ny fihinanana vary no fanalahidin' ny fitondran-tena ara-moraly, ary ny Frantsay nibodo ny tanin' ny Merina dia matetika nambanina fa mihinanana mofo fa tsy vary. Ny henan' omby koa dia mandray anjara betsaka amin' ny sakafo merina, ary araka ny lovantsofina am-bava merina dia mpanompon' ny mpanjaka Ralambo no nahita fa azo hanina ny omby ka nizara izany fahalalana izany tamin' ny mpanjaka, izay nampahafantatra izany amin' ny sisa amin' ny fanjakany.
Foto-tsakafon' ny Merina ny vary, mangahazo ary ovy. Mamboly tongolo sy fanampin-tsakafo hafa koa izy ireo, ary asa fivelomana lehibe koa ny fiompiana omby sy kisoa sy biby fiompy hafa. Maro amin' ny Merina no mifindra monina an-tanàn-dehibe, izay ahitana orinasa sy orinasa.
Ny hiragasy na ny vakodrazana dia mampifanaraka ny endrika mozika rehetra navoakan' ny Merina nandritra ny arivo taona. Ny zavamaneno nentim-paharazana merina dia ahitana ny valiha, ny sodina, ny lokanga ary karazana amponga maro. Tsy ny Merina manokana anefa no nampiasa ireo zavamaneno ireo fa ireo foko hafa eto amin' ny Nosy ihany koa. Tena nankasitrahan' ny Merina ireo tononkalo nalamin' izy ireo tamin' ny endrika hainteny. Tamin' ny fahatongavan' ny Eorôpeanina dia nandray ny pianô ny Merina ka noho izany dia namorona fomba fanaovana mozika miavaka izy ireo: ny ba gasy, izay mozika hiraina ary ampiarahina amin' ny pianô.
Tamin' ny andron' ny Vazimba, ny akanjo dia vita amin' ny zavamaniry ka ny rongony no manjaka amin' izany. Nandritra ny vanim-potoanan' ny tompomenakely merina, noho ny fandraisan' anjaran' ireo Aostrôneziana Indôneziana vao tonga, dia nampiasa landy be ny vahoaka.
Ny akanjo nentim-paharazana merina dia ny sikina, ny lamba ary ny salaka. Eto Madagasikara dia tahirin-kevitra tranainy vitsivitsy ihany no mampahatsiahy ny akanjon' ny razamben' ny Merina. Tsy fahita firy ny sary. Nitondra salaka sy sikina (kitamby, sarimbona) ny faritra rehetra manerana ny Nosy ka anisan' izany Imerina.
I Raintovo, ao amin'ny bokiny Antananarivo fahizay dia miresaka momba ireo mponin' Antananarivo izay nandoaka ny sofiny (haban-tsofina) mba ho lasa "Merina lava sofina" sy momba ireo tombokavatsa na tombokalana tsara tarehy izay nataon' ny tanora tamin' izany fotoana izany.
Toy izany koa, ny tanora merina dia zatra nanamainty nify amin' ny tambolo (Buchnera teptostachia) sy ny laingo (Paederia bojeriana). Ny vehivavy merina dia nandravaka ny sorony sy ny tratrany amin' ny tombokavatsa vita amin' ny fifangaroan' ny saribao sy ny ranom-boanantay (Solanum nigrum).
Lohahevitra mifandray aminy
Charlotte Liliane Rabesahala-Randriamananoro, Ambohimanga-Rova : approche anthropologique de la civilisation merina (Madagascar), Paris, Le Publieur, 2006, 393 p. (ISBN 2-85194-307-3) (Texte remanié d’une thèse soutenue à l’Université de La Réunion en 2002).
Emmanuel Ramilison (Pastor), Loharanon' ny Andriana nanjaka eto Imerina, Imprimerie Ankehitriny, 1951.
Georges Ramamonjy, "De quelques attitudes et coutumes merina", dans Mémoires de l'Institut scientifique de Madagascar (Tananarive), série C, Sciences humaines, 1 (2), 1952, p. 181-196.
J. P. Raison, "L'enracinement territorial des populations merina (Hautes Terres centrales malgaches). Fondements, modalités et adaptations", dans Espace géographique, 1986, vol. 15, n° 3, p. 161-171.
Jean Paulhan (trad. du malgache), Les hain-teny merinas : poésies populaires malgaches, Paris, P. Geuthner, 2007, 457 p. (ISBN 978-2-7053-3782-7) (Texte malgache et trad. française en regard, facsimile de l’édition de 1913).
Jean Paulhan, Le repas et l'amour chez les Mérinas, Montpellier, Fata Morgana, 2005 (1re éd. 1971, d’un manuscrit datant de 1912 ou 1913).
Joseph Rasamimanana (Dr.) et Louis de Gonzague Razafindrazaka (Governor), "Ny Andriantompokoindrindra", 1909, 50 pages.
Louis Molet, "Le feu domestique et la cuisine chez les Merina (Madagascar)", dans La cuisine : vocabulaire, activités, représentations, in Asie du Sud-Est et Monde Insulindien (Paris), 1978, vol. 9, n° 3-4, p. 49-66.
Marianne Skjortnes, "Gender and social change in Merina rural society", in Repenser "la femme malgache": de nouvelles perspectives sur le genre à Madagascar = Rethinking "la femme malgache": new views on gender in Madagascar, Institut de civilisations, Musée d'art et d'archéologie, Université d'Antananarivo, 2000, p. 219-238.
Maurice Bloch, From blessing to violence : history and ideology in the circumcision ritual of the Merina of Madagascar, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 1986, 214 p. (ISBN 0521314046).
Pier Martin Larson, "Desperately seeking 'the Merina' (Central Madagascar): reading ethnonyms and their semantic fields in African identity histories", in Journal of Southern African Studies, vol. 22, n° 4, décembre 1996, p. 541-560.
Pier Martin Larson, History and memory in the age of enslavement: becoming Merina in highland Madagascar, 1770-1822, Heunemann, Portsmouth ; James Currey, Oxford ; David Philip, Le Cap, 2000, XXXII-414 p. (ISBN 0-325-00216-9).
Raombana (l'historien), Histoires, 3 Volumes, 1809-1855.
Ravelojaona (Pasteur), Firaketana ny Fiteny sy ny Zavatra Malagasy, Encyclopedic Dictionary, 5 Volumes, 1937-1970.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Merina&oldid=1046022"
Dernière modification le 26 Jiona 2022, à 19:07
Voaova farany tamin'ny 26 Jiona 2022 amin'ny 19:07 ity pejy ity.